Ukuze umuntu ukulungisa - it is a adventure omkhulu. Futhi ngezinye izikhathi kunabantu abazama ukuyigwema noma ungase ulibale ukuqala ushintsho. Futhi ngokushesha nje lapho inqubo iyasebenza endleleni uqale ukuhlangabezana zemibuzo ehlukahlukene ezidinga izimpendulo. Okuvame kakhulu wabo - abanye usimende kangcono. Phela, ngaphandle-ke awukwazi ukulungisa izindonga, iphansi futhi Uphahla lwangaphakathi. Namuhla sifuna ingxube ekahle izinga kanye nentengo.
Gypsum noma kakhonkolo
Ngaphambi wallpapering noma elula izindonga anemibala abadinga ukuqondanisa. isidingo Special kule, uma kukhona imifantu ezinkulu noma chips. Lapha, phambi eziningi umbuzo uwukuthi, lokho kungcono usimende: usimende noma usimende? ukubukeka okuqala isenezinyanga look lokuqala.
Kuhle kokusho kanye lolu hlobo ingxube isetshenziselwa abaluphahleka izindonga ezindaweni ezincane. Lokhu kungenxa yokuthi ngokushesha osemanzi. Uma ungenalo ukukhumbula leli qiniso, ochwepheshe ukweluleka ukulungiselela isixazululo e esincane, usebenzisa mixer isakhiwo. Le nqubo wabe kanje:
Gilazi akhethiwe ligcwele ngenani elithandekayo amanzi.
Kungezwe ingxube eyomile.
Hlanganisa kahle kuze kube nokonakala oluphelele lwazo zonke izigaxa.
Futhi ke akuve ilula:
Isixazululo ukulungele olufuthwe phezu kodonga nge spatula.
Sabalalisa ngokulinganayo phezu kodonga.
Amathiphu ezivela kochwepheshe
Uma ngabe wazi ukuthi olukhonkiwe kungcono kuwe, kufanele ukusizakala ezinye izincomo:
Ngaphambi ngalinye elisha isixazululo nomkhombe izinsalela kusuka ethangini kumelwe kususwe futhi kahle bahlanza. izinhlayiya eqina zibulale izinga ingxube nomkhombe.
Lungiselela isixazululo ngokuvumelana bhukwana imfundo, okuboniswe ku iphasela ngalinye.
Khetha amathuluzi ilungelo ukusebenza nenye usimende. Kufanele uzilungiselele spatula ezimbili: lamafisha.
Uma ufika ayibhade izindonga nge ingxube ke qiniseka ukuthi bengazange zaveza ngamafutha ngopende. Uma ungeke ukwazi ukususa ke ebusweni, ke kuyadingeka ukusebenzisa yonkana odongeni notch. Bayoba coupling ephelele phakathi usimende kanye ebusweni.
Uma ufuna ukufeza izindonga ngokuphelele bushelelezi, ngemva abaluphahleka, afafaze ngalo amanzi avela Sprinkler. Ngemva le nqubo Phucuzani ebusweni kahle nge spatula lensimbi elide, steel okungcono engagqwali.
Uma uyeka bagxila usimende ke ungakwazi ngokuphepha uya esitolo. Futhi lapha siqala emehlweni washintsha kusukela ezihlukahlukene abakhiqizi. Phakathi kwabo ungathola brand ezilandelayo:
Phakathi Brands angaphandle owaziwa kungatholakala, futhi abakhiqizi yasekhaya. Ngokwesibonelo:
Kufanele ukukhulisa intengo usimende. Kuqhamuka kukho okulandelayo:
Umangele yini usimende kangcono, "Knauf" noma "Volma"? Impendulo ocacile wokuba kunzima ukunikeza. Lokhu kungenxa yokuthi:
"Knauf" laqanjwa izingxenye eliphezulu kanye izithasiselo, nakuba intengo lizophakama;
"Volma" has ezifanayo kodwa ngesikhathi esifanayo nesika-imbangi isiJalimane, kodwa futhi kube nezindleko eziphansi.
Stucco yaqaphela ifomu eyomile. It is igcwele ezikhwameni 25 no-50 kg. Izindleko kwelinye iphakethe kungaba kuze ruble 400. Kufinyeta bonke ngenhla. Kuyadingeka ukuba aphathe endaweni encane? usimende ekhethiwe. Yikuphi okungcono? Uyazibonela nje nawe, kuye ngokuthi amakhono abo zezimali kanye nokuqondanisa isikhala. Zonke abakhiqizi afakwe ohlwini ngaphezulu azothola ukuphendula umbuzo wakho main, okuyinto engcono usimende izindonga. Bonke babe mayelana ukwakheka efanayo. Umahluko owokuthi emalini kanye nophawu.
Gypsum ngokumelene usimende
It kuyafaneleka ukucabangela omunye omele amamiksi owomile. Lezi zihlanganisa usimende. Kabanzi izindonga Ingaphakathi nengaphandle. Kodwa ukusebenzisa, kukhona eyodwa ethile enkulu. Hhayi Kunconywa ukuba isetshenziswe umhlobiso izakhiwo zokuhlala. Ngakho-ke, kulesi simo phambi kwakho kwaba umbuzo lapho usimende - kuba ukhonkolo noma usimende kangcono, kubonelelwa kakhulu ama-a samuntu kuqala. Nakuba ezikhulu yesibili has izinzuzo ezilandelayo:
ukuphila inkonzo okuphezulu.
I enamathela siphelile iba bushelelezi kahle.
Ingasetshenziselwa for kokuphothula amakamelo ezimanzi.
Kuyaphawuleka ukuthi ebusweni aqhephukile kungaba, uma uye walungisa isixazululo ngokulandela imiyalelo. Futhi kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ebusweni kumelwe yome isakhiwo bebodwa ngaphandle kokusebenzisa umshini wokomisa izinwele.
Ngo ezitolo DIY ungahlangana a usimende usimende ofakwe abahlukahlukene. Ngokuvamile lokhu indima eyadlalwa isihlabathi kwamafrakshini ezahlukene.
Abakhiqizi usimende Izingxube
Ubuchwepheshe banamuhla buye wagxumela phambili. Noma yimuphi ingxube ingatholakala esitolo, kunokuba ukulungiselela bebodwa kusuka edayisa izinsimbi materials. Uyazi yini usimende kangcono, kodwa simo we okufunwa kakhulu abakhiqizi kasimende amamiksi:
"Knauf". Ingxube ezomile ingatholakala izikhwama ivolumu ezipakishiwe kusuka 5 kuya ku-30 kg. Izindleko ingeqi ruble 450 iphakethe ngalinye. Ungakwazi pick up olukhonkiwe nge izithasiselo Site kokuqeda kokubili izindonga yokuhlala nengaphandle.
"Bergauf". Itholakala izikhwama 25 kg. Izindleko amaphasela ruble mayelana 270. Ezisetshenziswa kakhulu ngaphansi anolaka sekugcineni izakhiwo.
"Basics". Ikhishwa emasakeni 25 no-30 kg. Kusukela zonke izinhlobo yangaphambilini ye ezahlukene isisindo engasindi futhi ukusetshenziswa ukonga. Inani elilodwa isikhwama ruble mayelana 195.
"Volma AKVAPLAST". Ingxube ezomile igcwele ngemigodla 25 kg. Izindleko amaphasela ruble 220-230. Ukwakheka kuyinto usimende nje kuphela kodwa futhi izingxenye amaminerali.
Noma kunjalo, i-ingaphakathi umhlobiso usimende efanelekayo. Yikuphi okungcono - obaziyo. Futhi manje wazi sha kanye usimende Izingxube.
Noma kunjalo, uma kudingeka ukuba akhethe, ungafunda izeluleko kongoti:
Gypsum ingxube - plastic;
grout sizonikeza amandla kwamanzi;
Gypsum ingxube seyomile ngokushesha futhi ngeke kudingeke kokuqeda;
futhi, kusobala, isixazululo usimende asifanele mbumbulu.
Eyesithathu - hhayi engadingekile
Uyazi okuningi Gypsum usimende ingxube. Ngamunye wabo ufanelwe ukuqashelwa. Ucabangani, ukuthi kungcono usimende - Gypsum noma lime? Sizozama ukuphendula lo mbuzo. Okokuqala, ake sicabangele lo emihle nemibi ingxube. Ake uqale nge izikhathi ezingemnandi:
Ngemuva omiswe, udonga ingaqhubeka namanje engalingani.
Bome isikhathi eside. Kuthatha cishe cishe izinsuku ezimbili.
Usimende engagxilile. Uma odongeni iphathwa ukuze hammer nail, ungqimba calcareous kungenzeka sidilike.
Kanye nazo zonke amaphutha atholakala nesithunzi:
isixazululo Ulungele isikhathi eside kungaqali owomile, unekhono ukuncibilikisa ukulisebenzisa esizayo.
Ekhomba lime usimende kulula futhi elula (kuqhathaniswa usimende).
Sebenzisa ingxube ngangokunokwenzeka mashing ukhonkolo, izinkuni noma isitini.
Kodwa hhayi kuphela izindonga abadinga izinga abaluphahleka.
Ukuze siphendule lo mbuzo, ukuthi yini ezilungele kangcono usimende ophahleni kufanele bafunde amanye amaqhinga professional:
Le nhlanganisela ilungele phezulu ukuphakama umehluko ingeqi 5 cm.
Ingxube Gypsum ingasetshenziswa uphawu phakathi amapuleti.
Ngaphambi kokufaka isicelo olukhonkiwe liyadingeka prime ne ophahleni bese ulinda kuze kube seyomile.
Kuwufanele ukuba banake abakhiqizi ezimbili ezaziwa izigaba umkhiqizo:
Kungashintshiwe uhlala umholi brand of "Knauf - Rotband". Ikhishwa ephepheni amasaka 30 kg. Izindleko eyodwa iphakethe ruble mayelana 370.
izinga mncintiswano German kungaba kuphela ukwenza umkhiqizi, okungukuthi, "abavukuzi 'yethu yasekhaya. Ingxube igcwele ngemigodla 30 kg. Izindleko kuyinto ruble mayelana 300.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi lokho usimende Kuhle ukungayidli kuphela izindonga, kodwa nezalo Uphahla lwangaphakathi. Phakathi kwabo bonke labo okunezinhlobonhlobo ethulwa ungakwazi sithathe ukuxuba izinga okungukuthi ekufanele.